မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: SungKyunKwan Scandal ထပ်တိုးအုံးမလား?
Info and Photo source : www.dramabeans.com
ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ဇာတ်အိမ်လေး.... ပုံစံစုံချောမောလှတဲ့ မင်းသားတွေနဲ့ ချစ်စရာ မင်းသမီးလေးနဲ့ ရင်ခုန်စရာ ဇာတ်ကားလေးဖြစ်တဲ့ SungKyunKwan Scandal ဟာ ပရိတ်သတ်ရဲ့ရင်ကို ဖမ်းစားပြီး ကိုရီးယားမှာ တဖြည်းဖြည်း rating ကောင်းလာခဲ့ပါပြီ... အဲဒိအတွက် ဒီကားကို ဆက်ပြီး ရှည်ရှည်ရိုက်ဖို့ ပရိတ်သတ်ရဲ့ တောင်းဆိုမှုကလဲ များများလာပါတယ်...
ဒီကားကို ယာထားတဲ့ အပိုင်း ၂၀ ထက် ထပ်ပြီး တိုးရိုက်ဖို့ စဉ်းစားထားကြောင်း... အကယ်၍ သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ အချိန်စာရင်းတွေ အားလုံး အဆင်ပြေရင်ဖြစ်ဖြစ်... ရုပ်ရှင်အတွက် Budget လောက်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်... ပရိတ်သတ်အားပေးမှုများရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်.. ဆက်လက်ရိုက်ကူးဖို့ စိတ်ကူးရှိတယ်လို့ Producer ကပြောသွားပါတယ်... ဒါပေမဲ့ သိပ်တော့ မျှော်လင့်ချက် မထားလိုက်ပါနဲ့... သူတို့ ဆက်ရိုက်ဖို့ ကျော်ဖြတ်ရမဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကလဲမနည်းပါဘူး...
SungKyunKwan Scandal ကို အားပေးတဲ့ အွန်လိုင်း ပရိတ်သတ်ရဲ့ အားပေးမှုနဲ့ တခြား ဇာတ်လမ်းတွေကိုအားပေးမှုကို ယှဉ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ အတော်လေး ကွာခြားနေတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်... SungKyunKwan Scandal ရဲ့ official Homepage မှာ ပရိတ်သတ်တွေက ပေးပို့တဲ့ စာပေါင်း ၁၂၀,၀၀၀ ကျော်တွေ့ရပါတယ်... အဲဒိ အရေအတွက်ဟာ ဟိုတစ်လောက ပြသွားတဲ့ Chuno ရဲ့ ၃ဆရှိပြီး.. တလောကမှ ပြီးသွားတဲ့ rating ကောင်းတဲ့ ကား Baker King Tak-gu ထက် ၄ဆရှိတဲ့အပြင်... နာမည်ကျော် action drama IRIS ထပ် ၂ ဆရှိတယ်လို့ အံ့မခန်းတွေ့ရှိရပါတယ်...
ထပ်ပေါင်းပြောရရင်ဖြင့် Drama's board ရဲ့ ပေါ်ပြူလာ portal DC ထဲမှာ ၁၆၀,၀၀၀ messages ပေါင်းတွေ့ရှိရရပါတယ်.. DC ထဲမှာ Boys Before Flowers ပြီးရင် ဒုတိယမြောက် ရေးသားသူ အများဆုံးဟာ SungKyunKwan Scandal ဖြစ်နေတာ တွေ့ရှိရပါတယ်...
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတစ်ခုက Baker King တို့လို ကိုရီးယားမှာ Rating အရမ်းမြင့်တဲ့ကားတွေတောင် ဒီလောက် messages မများပဲ SungKyunKwan လိုမျိုး 6.3% rating နဲ့စပြီး တဖြည်းဖြည်း မြင့်တက်လာတဲ့ နှုန်းပါပဲ...
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲကို အားပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ ထောက်ပြချက်အရ Yoon-hee (မင်းသမီး) နဲ့ Sun-Joon (ပထမမင်းသား) ကြားက အချစ်ဇာတ်လမ်းက episodes3ခုပဲကျန်တော့တဲ့အတွက် အားမရဖြစ်နေပါတယ်တဲ့... (မကြည့်ရသေးသူများအတွက် ရှင်းချက်... မင်းသားက တစ်ကားလုံး မင်းသမီးကို ယောကျာင်္းပဲထင်နေတဲ့အတွက်ပါ... ကားဆုံးခါနီးအပိုင်း ၁၆ ရောက်မှပဲ မိန်းကလေးမှန်းသိသွားပါတယ်)
အဲဒီအတွက် တာဝန်ရှိသူက "ဒီဇာတ်အိမ်ကတော့ လွယ်လွယ်နဲ့ ထပ်ရှည်ချင် ရှည်လို့ရနိုင်ပါတယ်.. နောက်ထပ် ၁၀ တွဲလောက် လောက်ကို ဆက်ဆွဲနိုင်ပါတယ်... ဒီအခြေအနေမှာတောင် နောက်ထပ် episode4ခုလောက် ထပ်ရှည်လို့ရပါသေးတယ်... တကယ်လို့ သရုပ်ဆောင်တွေအားလုံးသာ သဘောတူရင် ကျွန်တော်တို့ ဆက်ရိုက်ချင်ပါသေးတယ်... ဒါပေမဲ့ ဆက်ရိုက်မယ်ဆိုရင် အချိန်လိုမှာဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့ရဲ့ schedules တွေရမရဆိုတာက ခက်နေပါတယ်" လို့ အဆုံးပိုင်းမှာ စိတ်ပျက်စွာပဲ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်...
တကယ်လို့ ထပ်ပြီး တိုးရိုက်မယ်ဆိုရင် သူ ဘယ်လို ဇာတ်လမ်းကို တိုးမလဲ?
ဒီတော့ တာဝန်ရှိသူက "ဒုတိယမင်းသား Moon Jae-shin ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို ဒိထက် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းတိုးရိုက်လို့ရမယ်... ပြီးတော့ မင်းသားနဲ့ မင်းသမီးရဲ့ ဇာတ်လမ်းကိုလဲ နဲနဲတိုးလိုက်လို့ရမယ်... အဓိက အချစ်ဇာတ်လမ်းအပြင်... ကျောင်းတွင်းမှာရှိတဲ့ ပြဿနာတွေကိုလဲ လှည့်ရိုက်လို့ရသေးတယ်... တကယ်လို့သာ ဆက်ရိုက်လို့ရမယ်ဆိုရင်တော့ ဇာတ်လမ်းတွေအများကြီးရှိတဲ့ အလွန်ကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုပါပဲ... ဒါပေမဲ့ တကယ့် အခြေအနေတွေကတော့ ဆက်ရိုက်ဖို့ သိပ်အားမသာဘူးဖြစ်နေတာ ခက်တယ်... "
ခုလို miniseries (20 episodes or less) မျိုးကို ထပ်တိုးဖို့ဆိုတာ သာမာန်အားဖြင့် ငွေပမာဏမလုံလောက်မှုဖြစ်တတ်တဲ့အတွက် ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ဗဏီတွေက ယခုလို ထပ်မတိုးချင်ကြတာများပါတယ်.... နောက်ပြီး ယခုလို အွန်လိုင်းမှာ လူငယ်တွေကြိုက်ရုံကြောင့် ရလာတဲ့ ပေါ်ပြူလာဖြစ်မှုကို သူတို့လို Broadcaster တွေအတွက် စဉ်းစားလောက်စရာ သိပ်မရှိပါဘူး....
အဲဒိအတွက်ကြောင့် ယခုလို SungKyunKwan ရဲ့ ထုတ်လုပ်သူက ငွေကြေးကို လောင်းကြေးထပ်ပြီး ဆက်ချင်တယ်လို့ပြောလိုက်တာဟာ ရှေ့ဆက်ဖို့ ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတယ်လို့ ကြေငြာလိုက်သလိုပါပဲ...
သို့သော် ခက်တာက ပါဝင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေအတွက် အချိန်ရမရကိုပါ... ခေါင်းဆောင်မင်းသား Micky Yoochun ဟာ သူ့ pop group JYJ စီးရီးအသစ်အတွက် Asia tour လုပ်တော့မှာပါ... အစထဲက ဒီကားကို စက်တင်ဘာ လကုန်မှာ အပြီးရိုက်ဖို့ စီစဉ်ခဲ့သော်လည်း အကြောင်းကြောင်းကြောင့် နောက်ရွေ့ခဲ့ရသေးတဲ့အတွက် သူ့ schedule နဲ့ အတော်လေး ညိခဲ့ပါတယ်... အဲဒိအတွက် နောက်ထပ်ထပ်တိုးဖို့က ခက်နေပါတယ်...
နောက်ထပ် ဒီကားရဲ့ နာမည်ကြီးမှုကတော့ ဒီကားမှာပါတဲ့ ဇာတ်ဝင်တေးအခွေဟာ 120,000 ရောင်းထွက်ပြီးပါပြီ.... KBS's homepage မှာ တင်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ကို ကြည့်တဲ့ အကြိမ်ပေါင်းက ၁၉၀၀၀၀ ရှိပါပြီ... Chuno ၁၅၀၀၀၀ နဲ့ Baker King ကတော့ ၁၃၀၀၀၀ ပဲ ရရှိခဲ့တာပါ...
ဒီပုံလေးတွေကတော့ ပါဝင်တဲ့မင်းသား မင်းသမီးတွေကြားက ကင်မရာနောက်ကွယ်က လူဆိုးပဲ သရုပ်ဆောင်ဆောင် လူကောင်းပဲ သရုပ်ဆောင်ဆောင် ရင်းရင်းနှီးနှီးရှိတဲ့ ပင်ကိုယ်ပုံလေးတွေပါ...
ဒါဆို မဗေဒါဘလော့ကို ဖတ်တဲ့ SungKyunKwan Scandal ပရိတ်သတ်ကြီးရော ဇာတ်လမ်းကို ထပ်ရှည်ချင်သလား... မဗေဒါက ရှည်လဲ ရှည်စေချင်တယ်... ဒါပေမဲ့ အများကြီးတော့ မရှည်စေချင်ဘူး... ဘာလို့လဲဆိုတော့ သိပ်ရှည်လိုက်ရင်လဲ ပျင်းစရာကောင်းသွားလိမ့်မယ်.... ဆွဲသွားလိမ့်မယ်... ဒါပေမဲ့ ခု အပိုင်း ၂၀မှာလဲ လိုနေတာလေးတွေရှိသေးတယ်... နောက်ထပ် ၃ပိုင်း ၄ပိုင်းလောက်တိုးပေးရင်တော့ ကောင်းမယ်... နောက်တစ်ချက် မတိုးစေချင်တာက ဒုတိယမင်းသားရဲ့ ခံစားချက်ကို ထပ်နက်ရှိုင်းလိုက်ရင် သူက သိပ်သနားဖို့ကောင်းသွားမယ်... သူက နောက်ဆုံး မင်းသမီးကို မရမဲ့အတူတူ သူဆွေးတာကို မခံစားစေချင်ဘူး... Cho Sun နဲ့ ပေးစားလိုက်လဲ ကောင်းသား... ဟီး.. ဟီး... ဒါမှမဟုတ်လဲ Moon Jae shin နဲ့ Gu Yoon Ha သာ တွဲပေးလိုက်တော့.. ဟိဟိ... Gu Yoon Ha အတွက်ကလဲ ဟို လူဆိုးညီမလေးနဲ့ တွဲပေးလို့ရနေတယ်... သိတော့ဘူး... သူတို့ရိုက်သမျှပဲ ကြည့်ရတော့မပေါ့.... ဘာပဲပြောပြော ဒီကားလေးကို ခုလို အောင်မြင်တယ်ဆိုတော့ ဘာရယ်မဟုတ် ၀မ်းသာနေတာ... ဘာမဆိုင် ညာမဆိုင် ဒီကားထဲက Gu Yoon Ha (Song Joong-ki) ရဲ့ ကား Obstetrics and Gynecology Doctors ကိုတောင် ခုကြည့်နေသေးတယ်... သူတို့တွေရဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲနေ့ကို youtube မှာ အင်္ဂလိပ်စာတမ်းထိုးနဲ့ ကြည့်လို့ရတယ်... screen ရဲ့ အောက် ညာဘက်ထောင့်နားမှာ cc ဆိုတဲ့ ခလုပ်လေးကို နှိပ်ရင် အင်္ဂလိပ်စာတမ်းထိုးနဲ့ ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်တယ်....
Posted by mabaydar at 11:25 PM
haha..that drama is just too cute :D
even if there is extension, if they can make the drama not too boring, it wil be good :D
10/29/2010 11:35 PM
သိပ်မရှည်တာပဲကောင်းပါတယ်။ သိပ်ရှည်ရင် ဇတ်လမ်းက ပျင်းဖို့ကောင်းသွားမယ်ထင်တယ်။ ဒုတိယမင်းသားကို ခုကတည်းက သနားနေပြီး ထပ်ရှည်ပြီးတော့ မဆွေးခိုင်းပါနဲ့တော့..း)
10/29/2010 11:44 PM
i can't wait.i watch from kimchidram.blogspot.com.but ep 17 and 18 is chinese sub title.Really like it this drama.